सीमा नाकामा भारतीय सवारी आवागमन निषेध , भारतीय पाहुना आउन पाएका छैनन्,ब्यापार कसरी हुने ? - ACPNEWSNEPAL
Home Breaking News सीमा नाकामा भारतीय सवारी आवागमन निषेध , भारतीय पाहुना आउन पाएका छैनन्,ब्यापार...
सीमा नाकामा भारतीय सवारी आवागमन निषेध , भारतीय पाहुना आउन पाएका छैनन्,ब्यापार कसरी हुने ?
३० भाद्र २०७८, बुधबार १६:४३
३० गते भदौ २०७८ । वीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासको उत्तरतर्फ होटल ज्योति प्यालेस छ । कोरोना महामारीअघि होटलका ९ वटा कोठा पूरै बुकिङ हुन्थे । कर्मचारी पाहुनाको सेवामा व्यस्त रहन्थे । अहिले बढीमा ४ वटा कोठासम्म भाडामा लाग्छ ।
सँधैजसो भीडभाड रहने कुमु प्यालेस पछिल्ला दिनमा सुनसान जस्तै छ । होटलका १८ वटा कोठामध्ये मुस्किलले ५ वटासम्म भाडामा लाग्ने गरेको छ । २०÷२५ जना कर्मचारीलाई भ्याइनभ्याइ काम हुने होटलमा कार्यरत १० जना कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मुस्किल रहेको सञ्चालक बताउँछन् ।
वीरगञ्ज नाकाबाट आवतजावत गर्दै सर्वसाधारण
व्यवसायीले भारतीय निजी सवारीसाधन आवागमन तत्काल खोल्न माग गर्दै आएका छन् । भारतीय निजी गाडी आउन नदिएपछि स्थलमार्गबाट आउने भारतीय पाहुनाको आगमन ठप्प भएको व्यवसायीको भनाइ छ । कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि २०७६ चैत ११ मा सरकारले पहिलोपटक लकडाउन आव्हान ग¥यो । त्यसपछि दुवै देशका सरकारले नाका बन्द गरे । त्यतिबेलैदेखि भारतीय निजी गाडीको आवागमन रोकिएकोमा अझै खुल्न सकेको छैन ।
निषेधाज्ञाको समयमा सुनसान बनेको वीरगञ्ज घण्टाघर क्षेत्र
मापदण्ड एकातिर व्यवहार अर्कोतिर
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले लिएको नीतिलाई मान्ने हो भने नाकामा सर्वसाधारण सहजै ओहोरदोहोर गर्न नपाउनुपर्ने हो ।
अत्यावश्यक अवस्थामा नेपाली नागरिक बाहेकलाई आवागमनको अनुमति छैन । आवागमनका क्रममा सीमा नाकामा स्वास्थ्य चेकजाँचको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने नियम छ । तर सीमा नाकामा दोहोरो पैदल आवागमनमा कुनै प्रकारको रोकावट देखिँदैन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले पछिल्लो पटक भदौ १७ गते जारी गरेको सूचनामा वीरगञ्ज नाकाबाट विदेशी नागरिकको हकमा प्रवेश निषेध गरिएको उल्लेख छ । नेपाल प्रवेश गर्ने नेपाली नागरिकले पनि तोकिएको स्वास्थ्य जाँच र प्रक्रिया पूरा गरी स्थानीय तहले तोकेको आइसोलेसन सेन्टर वा होम आइसोलेसनमा अनिवार्य बस्नुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै वीरगञ्जको ईनर्वा बाहेक भारतबाट जिल्ला प्रवेश गर्ने नाकाबाट सीमा वारपार आवागमनमा रोक लगाइएको उल्लेख छ ।
तर प्रशासनले सीमा नाकाबाट भइरहेको सर्वसाधारणको आवागमन रोक्न सकेको छैन । सर्वसाधारण पैदल हिँडेर सीमाना वारपार गरिरहेको देखिन्छ ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिमिरे नाकाको विषयमा सरकारको अर्को निर्णय नआउँदासम्म केही गर्न नसक्ने बताउँछन् ।
‘नेपाल सरकारको निर्णयले नाकामा आवागमन स्थगित गरिएको हो । नेपाली नागरिकलाई प्रक्रिया पूरा गरेर आउन जान दिएका छौं । भारतीय निजी गाडी आउजाउ गर्न अर्को निर्णय नआउँदासम्म रोक नै छ,’ उनले भने । अनलाइनखबर
Previous articleनेपाली रेल भारतको कोलकाता सम्म ढुवानी गर्न पाउने
Next articleचिनलाइ चुनौती दिन अमेरिकाको नयाँ प्लान तयार